Diamondback ọ bụ ezigbo akara igwe kwụ otu ebe? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Diamondback narị afọ egwuregwu nyochaa - olee otu ị ga-esi dozie
Diamondback narị afọ egwuregwu nyochaa - olee otu ị ga-esi dozie
Ọ bụrụ na ị bụ onye mbido na ị nwere ego na-enweghị njedebe mgbe ahụ mkparịta ụka a agafeela. Naanị pụọ ebe ahụ ma jiri ụyọkọ ego na igwe mara mma ma ịmechaa. Mana echere m na ọtụtụ ndị mbido na-achọ nkwa ego pere mpe ha nwere ike ịme mgbe ha ka na-enweta ezigbo igwe kwụ otu ebe.
Ọ bụrụ na a ga-apụghị izere ezere taya dị larịị mgbe ị na-agba ịnyịnya ugwu, ọ bụ nsogbu na ịnwe ngbacha 15mm mgbe niile ka ị wepụ mkpụrụ ndị a. Nke ka njọ, igwe kwụ otu ebe na mkpụrụ osisi na axles fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịkwalite wiilị, na wiilị bụ otu n'ime ihe ị ga-eto karịa ka ị nwetara ahụmịhe. Yabụ na igwe elu ugwu dị elu, chọọ maka ndị na-agbapụta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị hụrụ mkpụrụ, pụọ.
Ma ọ bụghị ya, chọọ ihe ị nwere ike ịgbanye. Ihe ọzọ ị ga-achọ bụ brek diski na azụ. Ọbụna ọnụ igwe diski dị ọnụ ala nwere ike gbanwere maka ndị ka mma, nke dị mkpa ịmara n'ihi na igwe kwụ otu ebe ga-enwerịrị isi mgbakwunye maka ikike a site na mmalite.
zụta igwe kwụ otu ebe ọhụrụ
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-egosi ịnyịnya ígwè na-adọkpụgharị, ha anaghị adị mkpa ma ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe ahụ anaghị emezu ihe anyị chọrọ. Ugbu a, anyị ga-elekwasị anya n'ihe ị ga-atụ anya site na igwe kwụ otu ebe dị ka nke a, na ụfọdụ n'ime ihe ị nwere ike ime iji kwalite ya. Nke mbụ, ọ dị mkpa iburu n'obi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ịbanye n'ụgbọ ịnyịnya ígwè bụ B. hardtails ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe na-enweghị nkwụsị azụ.
ibu ịgba igwe kwụ otu ebe
Entgba ụgwọ karịa nke a agaghị abụ ihe echekwa ma tụlee na ezigbo ụzọ igwe kwụ otu ebe nwere ike ijide uru ya, ọ ga-aka mma ire ya ma melite ya niile. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịnwee igwe kwụ otu ebe ma chọpụta na ọ dara ụfọdụ n'ime ule ndị a, ị ka nwere ike irite uru site na edemede a. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ugbu a maka gị ma ọ masịrị gị mgbe ahụ ka ị na-atụgharị ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọ na-egbochi gị, ugbu a ị nwere ngwaọrụ ịchọta ihe ka mma.
sram ndorondoro vs force
Diamondback anyịnya igwe ha dị oke ọnụ?
Agbanyeghị, ha dị ọnụ ala karịa ndị asọmpi ha. Emere m nnyocha ma chọpụta nke ahụDiamondbackugwuanyịnya igwegburugburu $ 500 na-efu $ 200 - $ 400 na-erughị ndị ọzọanyịnya igwenke yiri àgwà. Otu ihe pụtara ìhè bụ nguzozi ha n’etiti ọnụ ahịa na ogo.Diamondback anyịnya igwena-enyekarị mma.Ọkt 9 2020
Diamondback ọ ka mma karịa Trek?
Diamondback anyịnya igwe na-aga ahịa?
Na 1999,Igwe igwe Diamondbackzụrụ ndị Derby Cycle Corporation, nke nwekwara RaleighCompanylọ ọrụ igwe kwụ otu ebe, ma jikota Raleigh naDiamondbackọnụ. Na 2001, Derby Cycle Corporation rere Releigh naDiamondback. N’ọnwa Ọgọst 2019, rere otu Accell GroupDiamondbackka Regent, L.P.
ịgba ígwè puerto rico
ỌtụtụDiamondbackugwuọnụahịa igwe kwụ otu ebemalite na ihe karịrị $ 300. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ iji ịnyịnya n'okporo ụzọ, ị ga-achọ imefu ihe ruru $ 500. N'inwe mmetụta nke ọgaranya, ịnwere ike iji ihe ruru $ 2,500 maka oke ugwu ha zuru okeigwe kwụ otu ebe.08.28.2013
Ọ bụ diamondback narị afọ 2 a ụzọ bike?
Diamondback Century 2 bu uzo ozo nke aluminom nke si na Century. Ihe nlereanya a nwere ọtụtụ nkwalite ma e jiri ya tụnyere nke mbụ. Nke ahụ na-eme ka ọ dabara adaba maka ndị nwere ahụmịhe ma nwee nnukwu ọchụnta.
Kedu nke kacha mma Diamondback Bike ịzụta?
Diamondback Century 4C bụ usoro kachasị ọnụ ahịa na usoro a nke nwere ikuku carbon zuru ezu. N'ihi nke ahụ, igwe kwụ otu ebe na-eru nso na-enweghị ihe ọ bụla, ọ na-arụkwa nke ọma karịa. Carbon abụwo ihe eji eme ọkọlọtọ maka igwe kwụ otu ebe dị elu ogologo oge.
Kedu ụdị taya nke Diamondback narị afọ 4C nwere?
Rim na brek bụ otu, nke bụ nkwekọrịta nke na-enye Diamondback ohere ire igwe kwụ otu ebe a na ọnụ ala dị ala. Taya na Century 4C bụ 28c, yabụ ị nwere ike ịnweta otu ụzọ 25c, dabere na ebe ị ga-agba ịnyịnya. Ọ bụrụ na ịzụta igwe kwụ otu ebe a, mmelite kachasị mma ị nwere ike ime bụ rim, nke nwere ike ịmị ọkụ.